Sida loo Waraaqda Audio ka MP4 on Windows iyo Mac?
Qaab video MP4 sii caan ah ay sabab u tahay in sharcigaasi waafaqsan yahay qalabka mobile dhowr. Inkastoo qaab MP4 waxaa loogu talagalay video files, waxaa laga yaabaa jeer marka aad kaliya doonaya inaan maqlo wax audio ka. In dhacdadaas oo kale, waxaad u baahan tahay software soo saarida audio in Siibnaa audio ka MP4 la doonayo. Waxaa jira diyaariyeen ah ee baakadaha software laga heli karo suuqa oo sheeganayay inay Macdan audio ka MP4 video files, oo kaliya wax yar oo ka mid ah ku siin kara natiijada la rabay la tayo leh.
Qaybta 1aad: Sida loo Waraaqda Audio ka MP4 by Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate?
Qeybta 2: Sidee Macdan MP3 ka MP4 by Isticmaalka iTunes11?
Qeybta 3: Sida loo Waraaqda Audio ka MP4 by Isticmaalka VLC?
Wondershare Video Converter Ultimate for Windows iyo "Wondershare Video Converter Ultimate for Mac" nidaamka ka hawlgala Mac waa mid ka mid ah software ugu fiican ee laga heli karo suuqa in Macdan karaa audio ka file video MP4. Software waxay bixisaa qaar ka mid ah muuqaalada dheeraad ah sida gubasho aad video files si DVD, diinta qaab kale sida Mpg iwm Waxa kale oo aad ka bedel kartaa videos isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate ah.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad soo saaro audio ka file video MP4, ka dibna raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 1 Daahfurka software iyo furi file MP4 aad
Tallaabada ugu horreysa waa in aan bilowno software Wondershare Video Converter Ultimate ka dibna dhirtuba in file ah in aad rabto in aad soo saaro audio ka. Waxaad ka furan kartaa files MP4 aad midkood u soo jiiday galay interface software ama kaliya la isticmaalayo "darto files" doorasho xitaa in file MP4 aad badbaadiyey.
Tallaabada 2 Dooro qaab wax soo saarka sida MP3 ah
Tallaabada xigta waa in la qeexo qaab saarka in aad raadinayso ah. Wixii doorashada qaab wax soo saarka, dooro "qaab" icon dibna dooran qaabka hoos "audio" qaybta. Wondershare Video Converter Ultimate Taageertaa tiro ka mid ah qaabab audio sida MP3.
Tallaabada 3 Beddelaan aad file
Marka aad ku cad qaab wax soo saarka, guji "Beddelaan" button in aynu software ka dhigi diinta aad u. File Waxaad ka furan kartaa qaab beddelidda kadib si ay u arkaan sababtay ah.
Haddii aad isticmaalayso iTunes11, ka dibna raac tallaabooyinka hoose si aad Macdan MP3 ka file video MP4:
Tallaabada 1 Daahfurka Lugood iyo dhirta si aad file video MP4
Tallaabada ugu horeysay waa in aan bilowno software Lugood iyo doorato faylka MP4 video in aad rabto in aad si loogu badalo.
Tallaabada 2 Calan aad door bidayso
Tallaabada xigta waa in ay dejiyaan doorashaada leh u MP3 Deji. Wixii dejinta doorashaada leh, in aad sidoo kale, waxaad dooran kartaa karaa "doorbidida" doorasho ka bar menu ama saxaafadeed "amarka + comma" furayaasha ku saabsan Mac.
Ka dib markii doorto Dooratay, uu furmo suuqa kala jeceshahay furi doonaa oo waxaad u leeyihiin in ay dooranayaan sare.
Ka dooro "Keenista" button sida u qabo qaybta sare. Laga soo bilaabo qaybta Keenista ku doortaan "MP3 encoder" oon la tilmaamayo goobaha aad.
Waxa kale oo aad dooran kartaa goobaha caado u ah heerka muunad iyo heerka yara adigoo dooranaya "Custom" sida u qabo qaybta dejinta iyadoo la isticmaalayo.
Tallaabada 3 Waraaqda aad audio
Marka aad sameeyey oo dhan isbedelka fursad u kala jeceshahay, waxaad hadda diyaar u yihiin in saaro audio ka faylkaaga video MP4. Hubi in aad dooratay wadada saxda ah dhawaaqa ka dibna dooro menu "sare". Dooro "badalo doorashada in MP3" Tan menu.
Marka diinta ka dhamaato, waxaad arki doontaa in si dhab ah waxaa jira laba files isku magaca leh. Warqada foomka ah ee labada faylasha waxay noqon doontaa kala duwan oo ka mid kale. Si loo xaqiijiyo in faylka sababtay waa qaab MP3, waxaad riixi kartaa "Command + I" si aad u aragto macluumaad faahfaahsan.
Waxba ma ahan in aad ka shaqeeya nidaamka Windows ka hawlgala ama nidaamka ka hawlgala Mac, VLC had iyo jeer ayaa kaa caawin kara in audio soo saarida ka MP4.
Haddii aad isticmaalayso Windows Operating System , ka dibna raac tallaabooyinka hoose si aad Macdan audio ka file video MP4:
Tallaabada 1 VLC Daahfurka
Tallaabada ugu horeysay waa in aan bilowno ciyaaryahan VLC iyo dooranayaan "badalo / Save" ka "Media" Bartan.
Tallaabada xigta waa in ay dar file la doonayo. Waxaad riix kartaa on the "darto files" fursadaha xitaa in aad file video MP4.
Tallaabada 3 Sheeg magaca iyo jidka loogu soo saarka
Waxaad badbaadin kartaa file sababtay in goobta default ama u sheeg adiga ku gaar ah. Waxa kale oo aad dooran kartaa magaca file aad file sababtay ah.
Tallaabada 4 Edit profile in ay MP3
Marka aad diinta aad file video MP4 galay file maqal ah iyada oo VLC, hubi in aad leedahay profile MP3 ah iyo sidoo kale. Waxaad edit karaa profile ee xulashada goobaha. A suuqa kala profile cusub muuqan doona, taas oo waxaad cayimi kartaa magaca cusub file iyo beddelo qaabka wax soo saarka. Dooro "regelingen" hoos "Encapsulation" tab iyo "MP3" hoos "codec audio" tab. Riix "badbaadin" badhanka si loo badbaadiyo cusub profile.
Talaabada 5 bilow raanta
Marka aad sameeyey oo dhan isbedelka profile ah, la xiro suuqa kala profile iyo guji "bilaabaan" button inuu ku soo bilowdo qaab beddelidda.
VLC hadda bilaabi doona nidaamka soo saarida iyo waqtiga la soo saaro inta badan ku xiran tahay inta uu le'eg yahay faylka.
Haddii aad isticmaalayso Mac Operating System , waxaad u baahan doontaa in la raaco nidaamka yar oo kala duwan u soo saarida MP3 ka file warbaahinta MP4 dhex VLC. Waa kuwan tallaabooyinku:
Tallaabada 1 Dooro file iyo abuurtaan VLC
Dooro file ka aad rabto in aad soo saaro audio ka dibna midig u guji si aad u furato menu macno ah. Laga soo bilaabo menu macno furay, doortaan "Open ee VLC". Marka file la furay VLC, doortaan "Beddelaan / Stream" doorasho ka "file" menu.
Tallaabada 2 Sheeg magaca iyo Noqosho
Marka aad doorato badalo doorasho / il, daaqad cusub muuqan doona meesha aad dooran kartaa meesha iyo magaca file sababtay.
Tallaabada 3 Edit profile ah
Wixii hawlaha qaab beddelidda, waxaad u baahan tahay in ay wax ka bedel ay profile iyo encapsulation dhigay regelingen iyo codec sida MP3.
Tallaabada 4 Dalbo goobaha iyo badalo
Marka aad ku badbaadi oo dhan goobaha, waxaad bilaabi kartaa diinta aad file. File Waxaad qulquli karaan si deg deg ah ka dib markii diinta ama badbaadin in folder cayimay dambe arkaysid.
> Resource > MP4 > Sidee Macdan Audio ka MP4 on Windows iyo Mac